Wasiirkii Tamarta iyo Biyaha Oo Xilkiisii Isaga Casilay Inuu Musharax U Noqdo Madaxweynaha K/Galbeed – Kalfadhi
Wasiirkii Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen), ayaa, siyuu musharax madaxweyne uga noqdo Koofur Galbeed, waxa uu maanta iska casilay jagada wasiirnimo, taas oo loo magacaabay bishii Meey ee sanadkan. Waxa uu sidaas uga hor dhawaaqay maanta suxufiyiinta magaalada Baydhabo.
“Waxaan u mahadcelinaayaa Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xassn Cali Kheyre, oo ii magacaabay xilkaas wasiirnimada, waxaana ka codsanaayaa inuu iga aqbalo iscasilaaddeyda, maadaama aan go’aansaday inaan tartaankaas ka qeybgalo” ayuu yiri Lafta Gareen.
Gudiga Doorashooyinka Koofur Galbeed ayaa shuruudaha ka qeybgalka musharaxnimada Madaxweynaha Koofur Galbeed kusoo daray inuusan tartanka ka qeybgeli karin qof haaya xil ama masuuliyad siyaasadeed oo kale, waana sababta uu Lafta Gareen isaga casilay jagadiisii wasiirnimo.
“Waxaan iska casilay xilkii wasiirnimo, maadaama Guddiga Doorashooyinka Koofur Galbeed shuruudihii ay soo saareen uu ku jiray inuusan musharax noqon karin nin haaya xil kale” ayuu yiri Musharax Lafta Gareen.
Hindise Sharciyeedka Dhismaha Hay'adda Naafada Qaranka Ayuu Golaha Shacabku Markale Ka Dooday Maanta